Raharaha Houcine Arfa : Mpitsara iray voasambotra -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Houcine Arfa : Mpitsara iray voasambotra
Iray tamin’ireo Mpitsara voatonona tao anatin’ny fitoriana napetrak’i Houcine Arfa no voasambotra ary nalefa any Ambatolampy amin’izao fotoana izao. Nifandray tsy tapaka nanomboka ny 25 hatramin’ny 29 Desambra 2017 ity Mpitsara ity ary ireo mpiandry fonja izay nanolo-tena fa hitondra an’i Houcine Arfa tany amin’ny tobi-pahasalamana. Ny faha-28 Desambra 2017 moa no daty nandosiran’ity teratany vahiny ity, izany hoe, mifanandrify tsara mihitsy tamin’ny fifandraisana an-tariby teo amin’ireo mpiandry fonja ary ilay mpitsara mpanao famotorana voalaza tetsy ambony fa nosamborina.
Nivaky ny marina ihany koa ilay mpamily taxi voalaza fa nitondra an’i Houcine Arfa niaraka tamin’ireo mpiandry fonja, araka ny fanampim-baovao azo, fa tsy nisy velively ny fitondrana an’i Houcine nankany Ambohitrarahaba. Ilay mpiandry fonja ihany no nandeha tamin’ilay taxi, izany hoe, tsy nisy ihany koa ilay fanafihana azy ireo teny an-dalana fa lainga nentina nanodinkodinana ny famotorana sy niaron-tena fotsiny. Marihana moa fa isan’ireo efa notànana am-ponja ity mpamily taxi ity.
Mipetraka araka izany ny fanontaniana manao hoe: « nahoana no voatonontonona ny anaran’ny ministry ny Fitsarana, ny talen’ny kabinetra ary ny mpampanoa lalàna Ambaratonga voalohany? ». Tsotra ny antony, noho ireo nanao izay hivoahan’ilay didy fampisamborana iraisam-pirenena an’i Houcine Arfa ka mba ho setrin’izany ary koa ho fiarovana ireo izay niray petsapetsa taminy dia nataony izay handotoana sy hanaratsiana ny Fitsarana Malagasy. Raha tsorina ny resaka dia nataon’ny sasany sorona hiarovany ny tenany sy hanafenana ny marina ireto tomponandraikitra ambony ireto ary nihevitra mihitsy i Houcine Arfa sy ny ekipany fa hahomby izany teti-dratsy izany.
Ary ny SMM?
Mitodika any amin’ny SMM indray ny masom-bahoaka amin’izao fivoaran’ny toe-draharaha mikasika ny raharaha Houcine Arfa izao. Hitsivalana amin’ireo fepetra horaisina ve ny SMM ka hiaro ireo meloka sy nanao fahadisoana? Tsy nitsahatra namoaka fanambarana mantsy ny SMM tamin’ity raharaha ity ary nanondro ny ministry ny Fitsarana sy ny talen’ny kabinetra mivantana mihitsy ny filohany. Andrasan’ny maro araka izany izay ho fihetsiky ny SMM mikasika ity fandosiran’i Houcine Arfa ity.
Voaporofo koa izao fa nataon’ilay mpandraharahan’ny fonja fitaovana fotsiny ny sendikan’ny mpiandry fonja tamin’ity raharaha ity. Ny tenany no anisan’ny nanomana ny fandosiran’i Houcine Arfa. Maromaro ihany anefa ny fanontaniana mipetraka eo anatrehan’izany rehetra izany: voalohany, fantatr’ireo mpiandry fonja mivondrona ao amin’ny sendika ve izao zavatra izao? Faharoa, ity mpandraharahan’ny fonja ity ve no nanosika ny sendika hangataka ny fialan’ny ministry ny Fitsarana? Fahatelo farany, hiaro olo-meloka ve ny sendikan’ny mpandraharahan’ny fonja?